I-10 yeBhonasi yeHlabathi yeBhaso eQeqeshiweyo yabarhwebi ngoJanuwari 2022 &Iipros kunye neengozi zayo ezingatyhilwanga
Iibhonasi ezili-10 eziPhambili ze-Forex zabaRhwebi ngo-2021
Ukuba unomdla wokufumanisa ukuba zeziphi iibhonasi ze-forex, zisebenza njani, kwaye kufuneka wenze ntoni ukuze ubange enye-qiniseka ukuba ufunde isikhokelo sethu Iibhonasi ezili-10 eziPhambili ze-Forex zabaRhwebi ngo-2021.
Ubanga i-100% yebhonasi yedipozithi ehambelana nomthengisi we-forex
Umthengisi we forex uvumela ibhonasi ephezulu ye- $ 1,000, yiyo loo nto ugqiba ukuyifaka
Emva kokwenza idipozithi yakho, umrhwebi emva koko afake iakhawunti yakho nge- £ 1,000 eyongezelelweyo
Ibhalansi yakho yokuqala yi- $ 2,000- nangona uhlawule kuphela iakhawunti yakho nge- £ 1,000
Ubanga i-20 ngebhonasi yedipozithi kunye nomrhwebi omtsha wase-UK
Uvula iakhawunti kwaye uqinisekise isazisi sakho - esifunekayo ukuthintela ukusetyenziswa gwenxa kwebhonasi
Nje ukuba isazisi sakho siqinisekiswe, Forex yorhwebo Indawo iya kuthi emva koko ikhredithi kwiakhawunti yakho nge- $ 20 akukho bhonasi yedipozithi
Ungaqala ngorhwebo ngeemali zakho zebhonasi kwangoko
Nangona le mizekelo ingasentla ibonisa indlela ezinokuba yinzuzo ngayo iibhonasi ze-forex, ayisiyiyo imeko yokufumana imali yebhonasi emva koko uyikhuphe. Ngokuchasene noko, kufuneka wazi inani lemiqathango kunye neemeko abathengi abazifaka ngokwabo.
Eyona nto inkulu emi endleleni yokuba ukwazi ukurhoxisa ibhonasi yakho ye-forex yile yezorhwebo ubuncinci. Masithi ubeka i- $ 500 kwaye ufumana ibhonasi eyi- $ 250- uthatha ibhalansi yakho yokuqala ukuya kwi- £ 750. Ukuba ubukwazile ukurhoxisa loo £ 750 ngqo kumthengisi we-forex nakwiakhawunti yakho yebhanki- ayizukuba yimodeli elungileyo yeshishini yeqonga. Ngokuchasene noko, iqonga lifuna ukuba usebenzise imali yebhonasi ukuthengisa.
Une- £ 250 kwimali yebhonasi
Umrhwebi uya kukhupha i- £ 1 kuyo yonke i- $ 10,000 ethengiswayo
I-10,000 x £ 250 = £ 2.5 yezigidi
Kananjalo, kuya kufuneka uthengise iyonke eyi- $ 2.5 yezigidi ukukhupha i- £ 250 epheleleyo kwaye ke-urhoxise ibhonasi iyonke
Ukuba la magama angentla ebengenanzima ngokwaneleyo, kuya kufuneka ujonge kwimida yexesha iibhonasi ze-forex eziza nazo. Eli lelinye iqhinga eliqeshwe ngamaqonga okwenza inkqubo yokuphuma kwebhonasi ibe ngumceli mngeni ngakumbi. Kwiimeko ezininzi, abarhwebi baya kukunika iintsuku ezingama-30 zokusebenzisa imali yebhonasi ngaphambi kokuba irhoxiswe.
Uninzi lweebhonasi ze-forex ziya kuza nemali encinci yedipozithi. Ukunyusa kuhlala kuchaza kuphela elona xabiso liphezulu lebhonasi livunyelweyo, ke kuyakufuneka umbe ngokwemigaqo kunye neemeko ukuze ufumane.
Iibhonasi eziBalaseleyo ze Forex kwi2021-Uluhlu lokuGqibela
Ke ngoku ukuba uxhobile ngolwazi olufunekayo ukuze wandise iinzame zakho zokuzingela ibhonasi, ngoku siza kudwelisa iibhonasi zethu ze-10 eziphezulu ze-2021.
Qaphela: Uninzi lwabarhwebi be-forex base-UK bane-presense yehlabathi jikelele - iibhonasi zihlala ziboniswa kwiidola zaseMelika. Ungakhathazeki, imali yebhonasi iya kufana neponti ($ 100 = £ 100), okanye umrhwebi uza kukunika i-GBP equivilent ($ 100 = £ 77).
1. Ibhonasi yeDeposithi yeMoneta
I-Markets.com ngumdlali ophambili kwindawo yase-UK ye-forex. Ngobuninzi bezibini zemali ezahlulwe phakathi kwee-majors, abantwana, kunye ne-exotic- inkundla yayo yorhwebo iphakame kakhulu. Uya kufumana i- £ 25 akukho bhonasi yedipozithi yokuvula iakhawunti. Ibhonasi yeyabathengi abatsha kuphela, kwaye akukho mda wexesha lokuzikhathaza.
4. Ukudibanisa-i-500- £ 20 Akukho Bhonasi yeDiphozithi yeBhonasi
Umrhwebi omkhulu wase-UK kunye ne-500 ujolise ekujongeni indawo yebhonasi. Ngokuvula iakhawunti, uya kunikwa ibhonasi eyi- $ 20- ngaphandle kokudipozitha. Iqonga ngokwalo lelinye labathengisi abathembekileyo kunye nabathengisi beCFD kwindawo yokurhweba kwi-Intanethi. I-Plus 500 iphethe iilayisensi ezininzi zokulawula kwaye inkampani yabazali idweliswe kwiLondon Stock Exchange.
£ 20 akukho bhonasi yedipozithi
Ifumaneka kuphela kubathengi bexesha lokuqala
Qinisekisa isazisi sakho ngaphambi kokuba urhoxe
5. Abasebenzisanayo (Interactive Brokers) - Ibhonasi eyi $ 200 yokuBhekisa phambili ngeBhonasi
Ukuba unosapho okanye abahlobo abanokuba nomdla wokwenza urhwebo nge-intanethi, kutheni ungacingi ukusebenzisa inkqubo yokuDlulisa abaThengisi abaSebenzayo? Umthengi ngamnye omtsha uza kuvula iakhawunti, uya kufumana i $ 200.
7. IiMarket zeCMC- i-2 x $ 200 yeBhonasi yeBhanki eyamkelekileyo
8. I-HYCM -I-10% yeBhonasi yeDiphozithi efikelela kwi $ 5,000
9. Itikiti - $ 30 yokuNgena kwiBhonasi yeBhonasi
10. TemplerFX - $ 30 Akukho Idipozithi Bonus
Ukuba usifundile isikhokelo sethu yonke indlela, kuya kufuneka ngoku ube nokuqonda okuqinisekileyo malunga nokuba yintoni ibhonasi ye-forex kwaye isebenza njani. Uyazi kwakhona ukuba abathengi bakho banikezela ngebhonasi yediphozithi ehambelana nayo okanye akukho bhonasi yedipozithi. Nokuba yeyiphi indlela, kuya kufuneka uqiniseke ukuba uyazi kakuhle imigaqo kunye neemeko zebhonasi. Ngobunzima, oku kugxila kwimali oya kucelwa ukuba urhwebe ngayo ngaphambi kokuba urhoxe. Kwiimeko ezininzi, ukuguqula ibhonasi ye-forex ibe yimali enokutsalwa iya kuba nzima kakhulu.
Umzekelo, abathengisi bafuna ukuba uthengise imali ezixabisa i-10,000 yeedola ukukhupha i-1 yeedola kwimali yebhonasi. Xa uqala ukuphindaphinda la manani ngebhonasi yamanani amathathu, ukhawuleza kakhulu kubunqolobi obunesigidi. Ekugqibeleni, akunakuba sengqiqweni ukubanga ibhonasi ye-forex ngombono wokwenza imali. Endaweni yoko, iibhonasi zisetyenziselwa ukuziqhelanisa kunye nokuphucula izakhono zakho zokurhweba kwindawo eyiyo-yehlabathi.
Awuyi kuba nakho ukurhoxisa ibhonasi ye-forex de ube uhlangabezana neemfuno ezincinci zorhwebo ezifumaneka ngokwemigaqo nemiqathango. Le milinganiselo ijikeleze i- $ 1 yemali yebhonasi ekhutshiweyo kuzo zonke iirandi ezili-10,000 XNUMX ozithengisayo.